Warar - Shan faa iidooyin ah oo dhalooyinka quraaradaha ah ay ku leeyihiin suuqa wax lagu rito
Waqtigan xaadirka ah, qaybta baakadaha ee suuqa gudaha, qalabka baakadaha ee qalab kala duwan, gaar ahaan balaastigga (qaabdhismeedka: cusbada synthetic, plasticizer, xasiliyaha, midabka) baakadaha dhalada, waxay haysaa kala bar suuqa ugu hooseeya ee warshadaha sharaabka. Jiangshan, badanaa sababta oo ah qiimaha hoose, gaadiidka fudud, iyo dib u warshadaynta habboon ee dhalooyinka caagga ah. Waxay caan ku yihiin warshadaha sharaabka. Dhibaatada phenol A (Emerson) ee dhalooyinka balaastigga ah ee si isdabajoog ah loo kashifay waxay sidoo kale sababeysaa macaamiil aad iyo aad u tiro badan (Macaamiisha) waxay fiiro gaar ah u leeyihiin cabitaanada ku xiran dhalooyinka quraaradaha ah markay doortaan cabitaanada ay isticmaalayaan, sababta oo ah baakadaha dhalada ka samaysan ma aha oo kaliya inay muujinayaan jawi sare, laakiin sidoo kale waxay ka gudubtay (tōng guò) waaxda kormeerka tayada qaranka Kormeerkeeda waa shey wax lagu duubo oo ay ku kalsoon yihiin macaamiisha.
Lumitaanka macaamiisha oo tartiib tartiib ah ayaa kicisay feejignaanta shirkadaha cabitaannada ee u isticmaalayay dhalooyinka caaga ah baakadaha. Qaar ka mid ah soo saarayaasha aragtida fog ayaa ka tagay dhalooyinka balaastigga ah waxayna u weecdeen baakadaha dhalada ka samaysan. In kasta oo ay kordhin doonto kharashka wax soo saarka bilowga, suuqa wuxuu lahaan doonaa waqti cayiman oo la qabsi. Tixgelinta muddada-dheer waa mid mudan. Haddii shirkadaha dhaqanka ay rabaan inay ku guuleystaan ​​suuqa muddo dheer, waa inay beddelaan oo ay la qabsadaan oo keliya. Quluubta dadku way guuleysan karaan suuqa. Sababta ay baakadaha dhalada ahi si tartiib tartiib ah ugu guuleysan doonaan qayb weyn oo ka mid ah saamiga suuqa oo ay doorbidaan shirkadaha baakadaha waa inay leeyihiin faa'iidooyinkiisa.
Aan kuu soo bandhigo maxay yihiin faa iidooyinka baakadaha dhalada:
(1) Maaddada muraayadda ah waxay leedahay sifooyin bilaa leedh ah oo aan waxyeello lahayn, sidoo kale waxay leedahay astaamo caqabad wanaagsan, oo si fiican uga hortagi kara qiijiyeynta iyo nabaad-guurka walxaha ku jira dhalada gaasas kala duwan, waxayna si wax ku ool ah uga hortagi kartaa isbeddelka waxyaabaha ku jira. Maaddooyinka waxay uumi baxaan hawada;
(2) Dhalooyinka quraaradaha dib ayaa loo isticmaali karaa loona isticmaali karaa si isdaba joog ah, taasoo yareyneysa qiimaha baakadaha loogu talagalay shirkadaha;
(3) Dareenka muraayadda hufan ayaa si fudud u diidi kara midabka waxyaabaha ku jira dhalada. Dhalada dhalada ah weelka baakadaha cabitaanka ee wadankeyga, muraayada sidoo kale waa nooc ka mid ah waxyaabaha baakadaha lagu raaco oo leh taariikh dheer. Iyada oo ay jiraan alaabooyin badan oo baakidh ah oo ku soo qulqulaya suuqa, weelasha dhalooyinka ayaa wali ku jira boos muhiim ah oo ku jira baakadaha sharaabka, taas oo aan laga sooci karin astaamaha baakaddeeda ee aaladaha kale ee wax lagu rido aanay beddeli karin.
(4) Dhalada dhalada ahi waa amaan iyo nadaafad, wax dhib ah oo aan dhib lahayn, waxay leedahay caabbinta daxalka wanaagsan iyo caabbinta astaamaha aashitada, waxayna leedahay faa'iidooyin baako gaar ah oo loogu talagalay warshadaha khamriga, warshadaha caanaha, warshadaha saliida la cuni karo, warshadaha sharaabka, iwm, gaar ahaan ku habboon ashitada. Maaddooyinka, sida khudradda iyo cabitaanka, baakadaha khalka ah ee la cuni karo;
(5) Intaa waxaa dheer, maxaa yeelay dhalooyinka quraaradaha ayaa ku habboon wax soo saarka ballaaran ee khadadka wax soo saarka tooska ah ee shirkadaha, horumarinta tiknoolajiyada tooska ah ee dhalada dhalada ah iyo qalabka sidoo kale waa mid qaan gaar ah, iyo baakadaha dhalada dhalada ayaa leh faa iidooyin wax soo saar aad u ballaaran oo gudaha ah iyo suuqyada shisheeye.
Nolosheena, biirka waa cabitaan si gaar ah caan u ah maxaa yeelay darajadiisa ma ahan mid aad u sareysa, waxayna dhadhamisaa macaan oo macaan, mana sahlana inaad khamri cabto hadaad cabto. Isla mar ahaantaana, biirka waxaa ka buuxsamay xumbo qaar. , Waxay dhadhamisaa dhadhan fiican, waxayna leedahay falcelin dheeri ah oo ku taal caarada afkeeda, marka kadib markii uu soo galay wadankeena, khamrigu si dhakhso ah ayuu uqabsaday dhalinyarada. Suuqa khamriga waxaa jeclaa dhalinyaro badan, laakiin hadaad rabto inaad u soo dirto biir meelo kala duwan sidoo kale waa inaad u baahatid xirmooyin kala duwan. Waxaa jira laba baako oo caadi ah oo suuqa ku jira, midna waa biirka dhalooyinka ku jira, midna waa biir gasacadaha ku jira. Maxay ku kala duwan yihiin labadooda? Marka hore, dhalinyaro badan waa inay moodayeen inuusan jirin farqi udhaxeeya labadooda, kaliya maadama ay kaladuwan yahiin. Xaqiiqdii, haddii aad ogtahay sababta ka dambeysa, waxaa lagu qiyaasaa inaadan iibsan doonin biir khaldan haddii aad khamri cabto mustaqbalka.
Dhamaanteen waan ognahay in darsin ama wax la mid ah sanado kahor qof walba caruurnimadiisa, daasado badan oo suuqa yaallay sidaa uma aheyn kuwa caan ah, sidaa darteed suuqa beerta ayaa xiligaas suuqa ku jiray, biirka dhalada galaaska ayaa ahaa kuwa guud, tobankii sano ee la soo dhaafayna, daasado tartiib tartiib ah loo beddelay qasacad Dukaamada waaweyn ama dukaamada, waxaan inta badan ku aragnaa biirka gasacadaha ku jira. Sababtoo ah qiimo jaban, miisaan fudud, fududahay in la qaado, waxay ilaalin kartaa daacadnimada inta lagu guda jiro gaadiidka, sidaas darteed daasadaha qamriga ayaa caan ku ah dad badan. La raadiyay ka dib.
Laakiin haddii nidaamka waxsoosaarka beeraha uu aado baararka farsamada farsamada dhammaadka-dhamaadka, waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada biirka ee khaanadaha, dhammaantood dhammaantood waa dhalooyin quraarado ah, oo marar dhif ah ayaad ku arki doontaa biirka gasacadaha, sidaa darteed hadda biirka dhalooyinka ku jira. ayaa sidoo kale la mid noqotay biirka tayada sare leh. Maxaa socda? Waxaa soo baxday in biirka asal ahaan laga soo miiro jeermiga qamadiga, sidaas darteed kaarboon laba ogsaydh ama nitrogen ayaa lagu daraa si loo cadaadiyo marka la buuxinayo, oksijiinta dhalada ku jirtaana waa la siidayaa sida ugu macquulsan.
Sidaa darteed, laga bilaabo maadooyinka gasacadaha iyo dhalooyinka quraaradaha ah, waxaan ka arki karnaa saameynta cadaadiska ee wanaagsan. Dhumucda muuqata ee dhalada dhalada ayaa ka weyn kana xoog badan daasadaha. Cadaadiska ay qaadi karto ayaa aad uga badan kan gasacadaha. , Marka cadaadiska la kordhiyo, cadaadis sare ayaa lagu dari karaa, si tayada biirka si fiican looga ilaaliyo. Intaa waxaa sii dheer, muraayaddu asal ahaan waa maaddo leh waxyaabo kiimiko aad u deggan, kumana ficil-celiso kiimiko leh biirka dhalada ku jira. Si kastaba ha noqotee, gasacadaha guud ahaan waxaa laga sameeyay aluminium-birta aluminium sida alaabta ceeriin. Qaarkood way dhici karaan markay la kulmaan biir. Jawaab ahaan, waqti ka dib, dhadhanka biirka ayaa ku dhici doona isbeddel aad u weyn, taas oo ka dhigaysa biirka dhadhanka xun iyo xitaa macdanta.
Markaa haddaan khamri u cabeyno si aan ugu fududaanno oo aan u cabbno kuwa leh aqoonta qamriga ee biirka, xaaladaha caadiga ah, waxaan doorannaa biirka qasacadaysan, sababtoo ah ma lihin baadi-goob aad u sarreeya oo tayada beerta ah, mana cabno wax badan. Noqo mid gaar ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan tixgelin miisaanka iyo qaadista, marka laga eego dhadhanka biirka, biirka dhalooyinka dhalada ayaa ka wanaagsan biirka ku jira gasacadaha. Sidaa darteed, haddii aan rabno inaan dhadhaminno tayada iyo macnaha biirka, waxaa fiican in la doorto biir tayo sare leh oo ku jira dhalooyinka quraaradaha ah.